Ihe mmetụta okpomọkụ kachasị mma maka Arduino | Akụrụngwa n'efu
Ndị ọrụ novice ma ọ bụ ndị ọrụ na-amalite ịmụ iji bọọdụ eletrọniki na-amụtakarị iji ọkụ LED na mmemme metụtara ya. Mgbe ọkụ gasị, ọtụtụ ndị ọrụ na-amalite ịmụ iji ihe mmetụta okpomọkụ.
Ọzọ anyị ga-ekwu maka ya ihe mmetụta okpomọkụ nke dị na Arduino, isi ihe dị mma ha, isi okwu ha na ọrụ ndị anyị nwere ike iji ha mee.
1 Kedu ihe bụ ihe mmetụta okpomọkụ?
2 Kedu nhọrọ ndị m nwere maka bọọdụ Arduino m?
2.1 Okpomọkụ mmetụta MLX90614ESF
2.2 Thermocouple -dị-k mmetụta
2.3 Arduino DHT22 okpomọkụ ihe mmetụta
2.4 Arduino TC74 okpomọkụ ihe mmetụta
2.5 Arduino LM35 okpomọkụ ihe mmetụta
3 Kedu ọrụ anyị nwere ike iji ihe mmetụta okpomọkụ maka Arduino mepụta?
4 Ọ bara uru iji ihe mmetụta okpomọkụ maka Arduino anyị?
Kedu ihe bụ ihe mmetụta okpomọkụ?
Igwe mmetụta okpomọkụ bụ akụrụngwa na-anakọta okpomọkụ na / ma ọ bụ iru mmiri site na mpụga ma gbanwee ya dị ka akara ngosi dijitalụ ma ọ bụ nke eletrọnik nke ọ na-ezigara na bọọdụ eletrọniki dịka bọọdụ Arduino. Enwere ọtụtụ ụdị mmetụta na maka ọtụtụ mpaghara. Anyị nwere kemgbe ihe mmetụta okpomọkụ maka ndị na-amu amu nke anyị nwere ike ịnweta maka euro 2 na ihe mmetụta sensọ nke ọkachamara na-efu ihe dị ka euro 200 kwa otu. Ọdịiche dị n'etiti ihe mmetụta okpomọkụ dị ọnụ ala na ihe mmetụta okpomọkụ dị oke ọnụ dị na arụmọrụ ọ na-enye.
Ihe ziri ezi dị n’etiti ezigbo ọnọdụ okpomọkụ na ọnọdụ mmetụta igwe okwu bụ otu n’ime ihe ndị na - emetụta ihe mgbe a bịara n’iche; Ọzọ ihe na-agbanwe bụ kacha na kacha nta okpomọkụ na ha na-ekwe, ịbụ ọkachamara okpomọkụ ihe mmetụta nke na-akwado ndị ọzọ degrees. Oge mmeghachi omume, inwe uche ma ọ bụ mmebi bụ ihe ndị ọzọ na-eme ka otu ihe mmetụta okpomọkụ na nke ọzọ dị iche.. N'ọnọdụ ọ bụla, ha niile dị maka ọrụ anyị ma naanị ọnụ ahịa ha nwere ike ịkwụsị ịzụta otu ma ọ bụ nke ọzọ.
Kedu nhọrọ ndị m nwere maka bọọdụ Arduino m?
N'okpuru ebe anyị na-egosi gị ụfọdụ ihe ama ama ama ama na anyị nwere ike ịchọta na ụlọ ahịa eletrọniki ọ bụla ma ọ bụ site na ụlọ ahịa n'ịntanetị maka obere ọnụahịa ma ọ bụ site na ngwugwu nwere ọtụtụ nkeji maka ọnụ ala. Ha abụghị nanị ha kamakwa Ee, ha bụ ndị Arduino Community kacha ewu ewu ma mara, nke na-eme ka o doo anya na anyị ga-enwe nkwado sara mbara nke ihe mmetụta ọ bụla nke okpomọkụ.
Okpomọkụ mmetụta MLX90614ESF
N'agbanyeghị na nwere a dịtụ iju aha, eziokwu bụ na Okpomọkụ mmetụta MLX90614ESF ọ bụ ihe mmetụta okpomọkụ nke na-eji infrared ìhè iji tụọ okpomọkụ. Ihe mmetụta a chọrọ nwere anya nke 90º na nkezi okpomọkụ ọ na-ewe ga-ezite ya site na akara ngosi 10-bit na bọọdụ Arduino. A na-ezipụ mgbaama dijitalụ na-eso usoro I2C ma ọ bụ na anyị nwekwara ike iji usoro PWM. N'agbanyeghị nwere elu nkà na ụzụ, a mmetụta nwere a pụtara ala price, anyị nwere ike ịhụ ya na ngwá electronic na-echekwa maka ihe € 13, a ala price ma ọ bụrụ na anyị na-elebara ohere ha na-enye.
Thermocouple -dị-k mmetụta
The Thermocouple Type-K ihe mmetụta bụ ọkachamara sensọ na-akwado elu okpomọkụ. Ihe mejupụtara ya dị mfe ebe ọ bụ na ọ bụ naanị otu eriri igwe ejiri ree ya na onye ntụgharị nke bụ ihe na --emepụta akara ngosi na Arduino. Usoro a na-eme ka Thermocouple Type-K Sensor nwere ike jide okpomọkụ n’etiti -200º C na 1350ºC odika, enweghị ihe jikọrọ ya na ihe mmetụta maka ihe omume ntụrụndụ, mana ọ na-emekwa ka ihe mmetụta a maka ọrụ ọkachamara dị ka ndị na-ekpo ọkụ, ngwaọrụ ndị a na-emepụta ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ chọrọ okpomọkụ dị elu.
Arduino DHT22 okpomọkụ ihe mmetụta
Ihe mmetụta okpomọkụ Arduino DHT22 es ihe mmetụta okpomọkụ nke dijitalụ na ọ bụghị naanị na-anakọta okpomọkụ ma na-anakọta iru mmiri nke gburugburu ebe obibi. A na-eziga mgbaàmà ahụ na Arduino site na akara ngosi dijitalụ 16-bit. Ọnọdụ okpomọkụ nke recoge nwoke a di n'etiti -40º C na 80º C. Ọnụ ego nke ihe mmetụta a bụ euro 5,31 kwa otu. Ọnụahịa dị elu karịa ihe mmetụta ndị ọzọ mana nke ahụ ziri ezi na ogo nke ihe mmetụta ahụ dị elu karịa ihe mmetụta ndị ọzọ.
Arduino TC74 okpomọkụ ihe mmetụta
Okpomọkụ mmetụta Arduino TC74 bụ ihe mmetụta nke na - ewepụta akara ngosi site na ntanetị N'adịghị ka sensọ ndị ọzọ nke na-ebunye ya n'ụzọ analog. Ihe mmetụta a na-ebufe site na akara ngosi 8-bit dijitalụ. Ọnụahịa nke ihe mmetụta a adịghị oke ala ma ọ bụghị nke dị elu, na-adịkarị gburugburu 5 euro kwa otu. A na-eme nkwukọrịta Arduino TC74 ihe mmetụta okpomọkụ site na iji usoro I2C. Ọnọdụ okpomọkụ nke ihe mmetụta a na-anakọta dị n'etiti los -40ºC na 125ºC.
Arduino LM35 okpomọkụ ihe mmetụta
Arduino LM35 ihe mmetụta okpomọkụ bụ ihe mmetụta dị oke ọnụ nke a na-eji maka ọrụ ntụrụndụ. Mmepụta nke ihe mmetụta a bụ analog na mmezi na-eme kpọmkwem na ogo Celsius. Ọ bụ ezie na anyị ga-ekwu na ihe mmetụta a anaghị akwado okpomọkụ dị elu. Ọnọdụ okpomọkụ ọ na-ekweta sitere na 2º C na 150º C. Nke a pụtara na ọ nweghị ike iwepụta ajọ ọnọdụ okpomọkụ yana ọ dị mma maka ịmụ etu esi eji igwe mmetụta okpomọkụ. Ọnụahịa ya na-eso ya, dịka anyị nwere ike chọta ihe mmetụta 10 maka euro 7 (odika).
Kedu ọrụ anyị nwere ike iji ihe mmetụta okpomọkụ maka Arduino mepụta?
Enwere ọtụtụ ọrụ anyị nwere ike iji ihe mmetụta okpomọkụ na bọọdụ Arduino mee. Ihe kachasị arụ ọrụ niile bụ ịmepụta temometa nke na-egosipụta dijitalụ na ntanetị. Si ebe a anyị nwere ike ịmepụta ọrụ ndị ọzọ dị ka ndị ọrụ igwe na-arụ ọrụ ụfọdụ mgbe ha ruru ọnọdụ okpomọkụ, ziga ụfọdụ akara na ụfọdụ okpomọkụ ma ọ bụ tinye fanye ihe mmetụta okpomọkụ dị ka usoro nchekwa iji gbanyụọ hob ma ọ bụ igwe ahụ ma ọ bụrụ na ị ga-eru ụfọdụ ọnọdụ okpomọkụ.
Aha na ọnụọgụ ọrụ anyị nwere ike iji ihe mmetụta okpomọkụ dị na Arduino mee nke ukwuu, ọ bụghị n'efu, ọ na-abụkarị otu n'ime ihe izizi ndị ọrụ novice na-amụkarị. Gbanye Ozizi anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ihe atụ nke otu esi eji ha.
Ọ bara uru iji ihe mmetụta okpomọkụ maka Arduino anyị?
Echere m na ịmụ otú e si eji ihe mmetụta okpomọkụ na Arduino dị mkpa ma dị mkpa. Ọ bụghị naanị ịmara ma jiri ngwa ngwa Arduino niile mana ịnwe ike ijikwa data okpomọkụ ma tinye ya na mmemme na-arụ ọrụ na Arduino. Mana anaghị m akwado iji ihe mmetụta sensọ, ma ọ dịkarịa ala na prototypes na incipient nmepe.
Echere m na a ga-ebu ụzọ kwado ya jiri ihe mmetụta maka ndị na-amu amu ma ozugbo a na-achịkwa ihe niile ma mepụta ọrụ ikpeazụ, yabụ ọ bụrụ na ị jiri ihe mmetụta ọkachamara. Ihe kpatara nke a bụ ụgwọ. Enwere ike imebi ihe mmetụta okpomọkụ site n'ọnọdụ dị iche iche ma enwere ike dochie ihe mmetụta amateur na-erughị euro abụọ. Kama nke ahụ, iji igwe ihe mmetụta dị elu nke okpomọkụ ga-amụba ọnụ ahịa ya site na 100.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Okpomọkụ mmetụta maka Arduino